Kugadzirira kugadzirira kwevane naughty castle | GFUN
Kugadzirira kugadzirira kwevane naughty castle
1. Zera reboka reNaughty Fort Paradise rinofanira kutsunga. Icho chakanaka 0-6 gore rebasa rechikoro, kana kungopinda kambasi.
2. Iyo nharaunda yeNaughty Fort Paradise inoonekwawo seyakanaka. Kana iyo iri diki, inogona kukanganisa zvinetso zvebhizimisi zvenguva refu. Inofanirwa kuongororwa zvakaringana zvichienderana nenyika yemari dzayo. Imwe yacho ndeyekudyara mumhando ipi yemidziyo yevatambi vevana inofanirwa kufananidzwa uye kuongororwa. Iyo yakasarudzika naughty castle ine yakaderera mari uye kuderera kushandira Iyo nyowani yemagetsi nyowani ine hukama hwakasimba hwevabereki nemwana, kuchengetedzeka uye hutsanana, uye nzvimbo yakavhurika imanzwiro akajeka. Izvo zvakakoshawo kusarudza nzvimbo yacho panguva imwechete. Izvo zvinodikanwa kuti uite kuongorora kweye tarisiro yebhizinesi yakadai sekufamba kwemotokari munzvimbo yakatenderedza yemotokari. Zvakanaka kusarudza imba yekutengesa mall, mall shopu, yakakura nharaunda, nezvimwewo, uye kuzivikanwa kunotarisisa mari.
3. Iyo zvakare inhanho yakakosha kusarudza iyo inogadzira yeana naughty bag emamuti emidziyo. Zvakanakira kuti ma investorti enda kumafekitendi kunoshanya kumunda, kuti vaone chimiro chemabasa avo uye huwandu hwenzvimbo yacho, uye kuve hunhu hwekugadzira, mukurumbira, uye nguva yekutumira mushure mekutengesa, nezvimwewo. kuita zvakateedzera kurongeka.
Kambani ye 4.GFUN inoshanda mukugadzira zvigadzirwa zvevasina kufambiswa, zvekufambisa mvura, zvigadzirwa zvemafaro emvura, zvigadzirwa zvevana zvekushambadzira, zvemukati zvemidziyo yekushambadzira yevana, zvishandiso zvekunze zvevana, zvishandiso zvekunze zvekushandisa uye zvakajairidzwa zvishandiso. Isu tiri yakazara yakakwana yeamusement Equipment kambani, inopa vatengi nekutsvaga uye kuvandudza, dhizaini, kugadzira, kutengesa, kuisa, basa uye zvakagadzirirwa mabasa.
GFUN inogamuchira vatengi kushanya uye kukurukura kushandira pamwe. Unogona kutibata nesu chero nguva kana paine mibvunzo.